Nutridieta: ny tranonkalanao fihinanana sakafo hampihena | | Sakafo Nutri | Nutri Diet
Nutridieta: ny tranonkalanao fihinanana sakafo mba hihena
Nutridieta dia tranokala natao ho an'ny sakafo manokana hanampiana anao hihena. Lazainay anao rehetra ny momba ny famenon-tsakafo ilaina indrindra, ary koa ny fananany sy ny tombony azo amin'ny fahasalamanao. Raha te hahalala ny sakafo mahomby indrindra ianao mba hampihena ny lanjanao, aza hadino ny lahatsoratray.
Ny sakafo mahomby indrindra
Raha manomboka mijery isika, dia misy sakafo tsy misy farany ananantsika. Fa ao Nutridieta no mitondra ny tsara indrindra ho anao sakafo ho very lanja sy hihazonana ny lanjao. Hevitra tena tsotra apetraka amin'ny fampiharana, tsy misy mosary ary miaraka amin'ireo torohevitra tsara indrindra mba hahafahanao mitazona ny lanjanao foana.
Izany no antony hahitanao ny tranokalanay eto sakafo malaza indrindra fa amin'ny fotoana iray ihany, ny tena mahomby sy azo antoka. Ireo izay manome toky antsika ny valiny tsara ary tsy mametraka loza amin'ny fahasalamantsika. Ho hitanao fa miaraka amin'ny antony manosika kely dia ho hitanao izany fomba hanary ny kilao fanampiny izany, ka eto dia ho eo am-pelatanana tsara ianao. Satria hahita menio mety amin'ny gadona isan'andro ianao sy ny sakafo mahasalama, manankarena indrindra ary mora indrindra azo omanina.
Te hahita sakafo fanampiny ve ianao?
Aza hadino ny mitsidika ny fizarana sakafonay izay hahitanao ny iray mety indrindra amin'ny zavatra ilainao.
Indraindray isika somary saro-kenatra rehefa lazaina amintsika Famenon-tsakafo very lanja. Saingy manomboka izao dia hanova ny hevitsika momba azy ireo isika. Satria ao amin'ny Nutridieta dia asehonay aminao ny fomba sasany amin'ny sakafo fototra sy ny famenon-tsakafo hafa afaka hahatratra ny vokatra tadiavinao hatrizay.
Indraindray manana famenon-tsakafo eny an-tanantsika isika saingy tsy haintsika ny mampiasa azy ireo. Vokatra voajanahary azonao ampiasaina amin'ny fahatokisana tanteraka hahatsapa sy ho tsara endrika kokoa. Ao amin'ny tranokalanay no ahitanao ny ohatra sy fanazavana mazava rehetra asehonay anao momba azy ireo. Hesorinao ny tahotra fanampin-tsakafo!
Te hahita famenon-tsakafo fanampiny ve ianao?
Ao amin'ny sehatry ny sakafo mahavelona anao dia hahita sakafo maro manana fananana mahafinaritra izay hanampy anao hihena ianao na hanatsara ny fahasalamanao. Fantatrao daholo ve?
Hizaha famenon-tsakafo bebe kokoa
Jereo ny tranokalanay
Mitondra a fomba fiaina mahasalama azo atao izany raha mbola manana torohevitra na torolàlana tsara isika hanatanterahana izany. Noho io antony io, ao Nutridieta no ahitanao andian-dahatsoratra feno, hampiharina eo am-pitandremana ny fahasalamanao sy hifehezana ny lanjanao. Amin'ny lafiny iray, azonao atao ny mankafy sakafo azo antoka indrindra sy voalanjalanja indrindra, izay mifanaraka amin'ny fomba fiainanao.
Mazava ho azy, etsy ankilany, amin'ny tranokalanay ho hitanao ireo fampahalalana ilaina momba ny sakafo izany dia eo ambony latabatra misy antsika indraindray, saingy tsy fantatsika tsara. Ny tombony, ny tombony ary ny fananany dia handrakotra ny ankamaroan'ity fampahalalana ity. Miaraka amin'izy ireo izahay dia manampy anao amin'ny fanomanana fomba fahandro matsiro, satria ny fihinanana sakafo mahasalama dia tsy tokony ho mankaleo.
Miresaka ihany koa izahay torohevitra momba ny fahasalamana ary koa ny aretina sasany, mba hanananao ny vaovao farany rehetra ary handinihanao ireo fisalasalana izay tonga ao an-tsainay indraindray. Mazava ho azy fa tsy manadino ireo fanazaran-tena mahasalama indrindra isika, ary koa ny fanatanjahan-tena tena ilaina sy ny vokatra na ny famenony izay hanome ny vatanao izay tena ilainy, miaraka amina fototra voajanahary hatrany.
Etsy ambany no hahitanao ny lisitry ny sokajy rehetra adiresinay Nutridiet:
Aza adino ny vaovao farany navoakanay tao amin'ny bilaogin'ny sakafonay.
Te-hahita ireo bokinay farany momba ny sakafo ve ianao?
Aza adino ireo lahatsoratra farany ao amin'ny bilaogin'ny sakafonay